Adobe Audition izao dia mifanaraka amin'ny processeur M1 an'ny Apple | Avy amin'ny mac aho
Adobe Audition izao dia manohana ireo mpikirakira Apple M1
Ignatius Room | | About us, Programa Mac
Rehefa mandeha ny volana dia havaozina tsikelikely ny fampiharana ny goavambe Adobe hatolotra Fanohanana teratany ho an'ny processeur Apple ARM, antsoina hoe Apple Silicon. Ny fampiharana farany avy amin'ity mpamorona ity hanohanana ny M1 an'ny Apple dia ny Adobe Audition.
Araka ny filazan'ny orinasa, ity kinova vaovao ity dia manolotra a fampisehoana haingana kokoa noho ny teo alohany, toy ny fanao mahazatra ao amin'ireo kinova ireo. Ankoatr'izay, avy amin'ny Adobe dia nanisy fiasa vaovao izy ireo hanafoanana ny fahanginana amin'ny firaketana ho azy fa tsy misy fiatraikany amin'ny kalitao farany.
Adobe dia nilaza fa ny kinova vaovao mifanentana amin'ny tanindrazana M1 dia manome fampivoarana tsara ho an'ny fandraketana sy fampifangaroana atiny avo lenta. Anisan'ireo fanatsarana tena lehibe atolotray antsika ity kinova ity ny mfampifangaroana haingana sy famoahana feo vokar ary koa ny fanavaozana ny fotoana tena izy ho an'ny Spectral Visualization Editor.
Na izany aza, tsy vaovao tsara daholo izany, toa azyTsy misy ny fandraisam-peo CD. Ho an'ny workflows amin'ny horonan-tsary, codecs; DV, XDCamEX, FastMpeg, DNX, Sony 65, ary Cineform dia tsy tohanan'ny Audition amin'ny M1 amin'izao fotoana izao.
Ity kinova vaovao ity dia misy ny fiasa Esory ny fahanginana, fiasa iray ahafahana mamantatra sy manafoana ireo faritra mangina amin'ny firaketana nefa tsy very ny fampifanarahana amin'ireo lalana hafa izay iasantsika. Ity asa ity dia mety amin'ny fanadiovana ireo rakipeo feo resadresaka toa ny podcast na ny atiny audio.
Ny masontsivana amin'ity fiasa ity azo ahitsy amin'ny toe-javatra miavaka toy ny tabataba tabataba na ambaratonga isan-karazany eo amin'ny olona tafiditra ao anaty rakipeo ary ahafahanao mamantatra sy manafoana mora foana ireo faritra amin'ilay làlana izay tsy misy atiny, mitsitsy fotoana sy faharetan'ny fanovana.
Ny kinova Adobe Audition mifanaraka amin'ny processeur M1 dia izao azo alaina amin'ny Creative Cloud ary misy ny kinova 1.4.2.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Adobe Audition izao dia manohana ireo mpikirakira Apple M1
Ahoana ny famoahana ny mailaka amin'ny mailaka mora foana
Tsaho tsy mitombina milaza fa miasa amin'ny console amin'ny finday i Apple